The Voice Of Somaliland: Midowga Yurub oo Sharuudo ku xidhay Dhaqaale la siiyo dowlada ku meel-gaadhka ah, ee Yey hormoodka ka yahay
Midowga Yurub oo Sharuudo ku xidhay Dhaqaale la siiyo dowlada ku meel-gaadhka ah, ee Yey hormoodka ka yahay
(Waridaad) Brussels - Dalalka Midowga Yurub, ayaa mar kale shuruudo adag ku xidhay taageero iyo dhaqaale ay siiyaan dowladda Federaalka KMG ah ee Somalia. Shuruudaha ayaa waxaa ka mid ah in dowladda KMG ah ee Somalia ay dalka ka qaado Xaalada deg deg ah, Islamarkaana baarlamanka uu ku shaqeeyo magaalada, Muqdisho, lana hirgeliyo wada hadallo dhinacya badan, si loo helo taageerada ururka Europe.
Golaha u qaabilsan Arrimaha Dibedda ururkaasi ayaa dowladda KMG ah ugu baaqay inay fuliso dhowr qodob si ay u hesho caaawimaadda dalalka reer Yurub loona maal geliyo ciidamada Afrikanka ah ee dalka la keenayo. Golaha ayaa hore ugu baaqay dowladda KMG ah ee Somalia inay hir geliso wada hadallo sal balaadhan oo ay dhinacyo badan ka qeyb galaan, si loogu guuleysto xasilooni kusoo dabbaalidda dalka Somalia iyo dib u heshiisiinta.
Golaha waxa uu dib u xaqiijiyay sida Ururka Midowga yurub uu u rajeynayo inuu caawiyo dadaalada nabad iyo dib u heshiisiin qaran looga hirgelinayo dalka Somalia.
Waxa kale oo uu golaha bayaankiisa ku yidhi inuu aad u dhararsanayo in la sameeyo jawi baarlamanka Somalia u ogolaanaya inuu shaqadiisa ka bilaabo Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Midowga Yurub waxa uu sheegay inuu dhinaca maaliyadda ka taageeri doono howlgalka AMISOM, mar kasta oo la fuliyo qodabada uu ururka dalbanayo.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Tuesday, February 13, 2007